आज भदौ २ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नु-होस् राशिफल ! – Nepal Online Khabar
भाद्र १, २०७८ मंगलबार 759
ताजगी र स्फुर्तिको अभाव रहनेछ। यसका साथै क्रो’धको अधिकता रहनेछ। यसको परिणाम स्वरूप काम बिग्रन सक्ला। अफिसमा अधिकारी र घरमा कुटुम्ब तथा विरोधीसँग वाद-विवादमा नपर्नुहोला। कुनै धार्मिक वा धार्मिक स्थानमा जाने अवसर प्राप्त होला।
अत्यधिक कार्यभार र खानपिनमा ला’पर्वाही गर्दा स्वास्थ्य खराब होला। समयमा भोजन र निन्द्रा नमिल्दा मानसिक रुपले बेचैन रहनुहुन्छ। यात्रामा समस्या आउन सक्ला। निर्धारित समयमा कार्य पूरा हुनेछैन। योग ध्यान र आध्यात्मिक पठनबाट राहत मिल्नेछ।
मोज-मस्ती र मनोरंजनको प्रवृत्तिमा विशेष रुचि रहनेछ। सार्वजनिक जीवनमा मान-प्रतिष्ठा वृद्दि हुनेछ। विपरीत लिङ्गीय व्यक्ति प्रति आ’कर्षण बढ्नेछ। प्रेमको प्रसंग आउनेछ। कुटुम्ब वा मित्रसँग बाहिर घुम्न जानुहुनेछ।
तपाईको दिन खुशी र सफलताको रहेको छ। परिवारमा सुख-शान्ति बनिरहनेछ। पेसा गर्ने व्यक्तिको अफिसमा अनुकुल वातावरण रहला। स्वास्थ्य स्वस्थ रहला। आर्थिक लाभ होला। आवश्यक खर्च होला।
तपाई शारीरिक- मानसिक स्वस्थताले काम गर्नुहुनेछ। सिर्जनात्मक प्रवृत्तिमा मन रहनेछ। साहित्य र कलाको क्षेत्रमा केहि नयाँ सिर्जना गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ। प्रेमी एवम् प्रिय व्यक्तिसँग भेट हुनेछ। सन्तानको शुभ समाचार मिल्नेछ। धार्मिक वा परोपकार कार्यले मन आनन्दित गर्नेछ।
तपाईले प्रतिकुलताको सामना गर्नुपर्नेछ। शारीरिक स्वास्थ्यको सम्बन्धमा गुनासो रहनेछ। मनमा चिन्ताको बोझ रहनाले मानसिक बेचैनी अनुभव होला। पारिवारिक सदस्यसँग झगडा हुन सक्ला। आमाको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा चिन्ता उत्पन्न होला। पढाईको लागि अनुकूल समय छैन।
वर्तमान समयमा भाग्यवृद्धि हुनाले साहस र कार्य हातमा लिनको लागि दिन शुभ छ। योग्य ठाउँमा लगानी गर्दा लाभदायक होला। परिवारमा भाई-बहिनीसँग आत्मीयता र मेलमिलाप रहनेछ। विदेशबाट समाचार मिल्नेछ।
नकारात्मक मानसिक वृत्ति टाल्नुहोला। नबोल्नुमा नै सबैभन्दा राम्रो कुरा हुनेछ। पारिवारिक सदस्यसँग सं’घर्षबाट बच्नुहोला। स्वास्थ्य सम्बन्धि गुनासो रहनेछ। अनावश्यक खर्चमा ध्यान दिनुहोला। विद्यार्थीको पढाईमा अवरोध आउनेछ।
निर्धारित कार्यमा सफलता र आर्थिक लाभ होला। सपरिवार माँगलिक प्रसंगमा उपस्थित हुनुहुनेछ। विशेष रूपले कुनै तीर्थयात्रा होला। आफन्तसँग भेट होला। दाम्पत्यजीवनमा निकट र मधुरता अनुभव गर्नुहुनेछ।
धार्मिक र आध्यात्मिक प्रवृत्तिमा अत्यधिक व्यस्त रहनुहुन्छ। पूजा- पाठ वा धार्मिक कार्यमा खर्च होला। आफन्त तथा परिवारसँग सम्हालेर बोल्नुहोला। अधिक परिश्रम गर्दापनि कम सफलता मिल्दा निराश अनुभव होला। स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला।
नयाँ कार्य वा आयोजन हातमा लिन सक्नुहुनेछ। मित्र , विशेषरुपले स्त्री मित्रबाट लाभ हुनेछ। सामाजिक मण्डलमा प्रसिद्दि र प्रतिष्ठा प्राप्त होला। श्रीमती र छोराको तर्फबाट सुख र सन्तोष अनुभव होला।
तपाईको दिन शुभ फलदायक छ। कामको सफालता र उच्च पदाधिकारीको प्रोत्साहनले उत्साह बढ्नेछ। व्यापारीको व्यापारमा आय वृद्दि होला। पिता एवम् वृद्दको तर्फबाट लाभ हुनेछ। परिवार उन्नतिको संयोग
Prevइलाममा थप ६१ जनामा को’रोना सं’क्रमण, सं’क्रमितको संख्या ४५११ पुग्यो !
Nextको’रोना को महामारीमा खोकिको समस्याले चिन्तिन हुनुन्छ? अप्नाउनुस उपाय !